The Big Bang Theory, Izinhlelo ze-TV. I The Big Bang Theory
ⓘ The Big Bang Theory, Izinhlelo ze-TV. I The Big Bang Theory uhlelo oluzichungechunge lwamahlaya lwaseMelika olwaqalwa, lwakhiqizwa ngu Chuck Lorre kanye no Bill ..
ⓘ The Big Bang Theory (Izinhlelo ze-TV)
I The Big Bang Theory uhlelo oluzichungechunge lwamahlaya lwaseMelika olwaqalwa, lwakhiqizwa ngu Chuck Lorre kanye no Bill Prady. Njengoba igama laloluhlelo lisho izihloko zeziqephu zaloluhlelo zihlala ziqala ngo The ukuze zifanise isimiso sezesayensi, ithiyori, experiment, ukuklama namawashi ahlekisayo isakhiwo phuzu noma ukuhleka usulu iphuzu elidingidwayo kuleso siqephu.
Ngo March 2017, i CBS yamemezela ukuthi loluchungechunge luvuselelwe kuze kube iminyaka emibili, loku okuholele kuma sizini angu 12 walochungechunge. Isizini yeshumi nanye yaqala ngezi September 25, 2017.
Wikipedia: The Big Bang Theory (Izinhlelo ze-TV)